Aperture-ka Apple ayaa la waayi doonaa bisha Sebtember iyada oo Mojave | Abuurista khadka tooska ah
Haddii sabab kasta ha noqotee aad tahay isticmaale Qalabka dib-u-hagaajinta sawirka Apple ee ApertureWaxaad sifiican uga fikireysaa inaad u haajirto dhamaan sawirada aad maktabada ku haysid, maxaa yeelay noloshaadu way fiicnaan doontaa.
Sababta tan ayaa ugu wacan ilaa noocyada soo socda ee macOS in aysan haysan doonin qalabkan dib loogu hagaajinayo sawirrada shirkadda caanka ah ee Apple taasna ay malaayiin taageerayaal ah ku leeyihiin meeraha oo dhan.
Kaaga sii darane, waxaan ku naqaanaa nuncio-daan by bogga taageerada Apple taasna waxaa lagu arkay MacRumors. Sidoo kale waa inaad ogaataa inaan ku wajahan nahay aalad aan horumar ku jirin tan iyo 2014, oo ah shan sano. Waqti aad u sarreeya oo aan lahayn wax cusub.
Marka lama yaabi karno Apple inay qaadatay go'aanka ah inay ka saarto noocyada mustaqbalka ee macOS adoo raacaya Mojave, sidoo kale. Haddaan intaas ku darnos sahlanaanta isticmaalka Sawirada Apple, waa la fahmi karaa in xitaa dadka isticmaala ay meel iska dhigeen ka hor wax ku oolnimadeeda.
Waxay noqon doontaa bisha Sebtember goorta ay bilaabmayso soo bixitaanka Mojave, taas oo horseedi doonta in la waayo Aperture, markaa waxaad ku jirtaa waqtigii aad u guuri lahayd dhammaan maktabadda sawirka ee aad ku haysato barnaamijkan Apple. Waxay ka timid isla bogga taageerada kaas oo aan ka heli karno tilmaamaha si aan ugu haajirno barnaamijka Apple Photos ama Adobe Lightroom Classic lafteeda.
Sida had iyo jeer waxaad marin u heli kartaa waxyaabo kale oo beddelaad ah Sidee u noqon karaa Sawirka Affinity?, taas oo ugu yar ee euro, wixii ay ku soo celiso, waxay noqon kartaa barnaamijka ku habboon in lagu beddelo Aperture-ka Apple. Mid ka mid ah wararkaas oo haddii aynaan dheg u dhigin aan lumin karno sawiradaas aan ku haysannay Apertura.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Tifatiraha sawirka Aperture ee Apple wuu dhiman doonaa